एजेन्सी, २६ वैशाख । अमेरिकाको उटाह हाईवेमा तैनाथ एक प्रहरीले सडकमा गुडिरहेको एउटा गाडीलाई रोके । उक्त गाडी ३० किलोमिटरप्रति घण्टाको रफ्तारमा सीमित लेनबाट भित्र र बाहिर गर्दै कुदिरहेको थियो । गाडीको झ्याल खोलेर भित्र हेर्दा ह्वील स्टेरिङमा सानो बच्चाको हात थियो ।
गाडी वरिपरी हेर्दा कोही थिएनन् । सुरुमा त ट्राफिक प्रहरी पनि गाडी चालक कुनै शारीरिक अपाङ्गता भएको व्याक्ति होला भनेर झुक्किएका थिए ।
ड्युटीमा खटिएका ती प्रहरीले आश्चर्यमा हुँदै सबैभन्दा पहिले ती बालकको उमेर सोधे । प्रतित्युतरमा बालकले ‘पाँच वर्ष’ भन्यो । प्रहरीको होश त तब उड्यो जब त्यो पाँच वर्षको बालकले आफूले बुवाआमाको कारको चाबी चोरेर आफ्नो लागि लम्बरगिनी गाडी किन्न घरबाट भागेको कुरा बताए ।
एड्रिन जामारिप्पा नामका ती बालकले बुवा आमालाई थाहा नै नदिई तीन डलर गोजीमा बोकेर लम्बरगिनी गाडी किन्न क्यालिफोर्नियाका लागि घरबाट निस्किएका थिए । तर प्रहरीले उनलाई उटाहको हाईवे मै रोकेर घर फर्काइ दिए । उनी मंगलबार घर फिर्ता आईपुगे ।
तर लम्बरगिती चढ्ने सपना पूरा नभए पनि उनको यो अदम्य सहास र अदभूत क्षमताले उनलाई लक्जरी कार दिलाएको छ ।
अन्तराष्ट्रिय हेडलाइन बनेका ती बालकलाई स्थानीय बिजनेसम्यान जेरेमी नर्भ्सले मेट ब्लयाक टु सिटर हुराक्यान गिफ्ट गरेका हुन् ।
पाँच वर्षे बालकclose
देश, प्रदेश १, यस्तो पनि
अनि ऋषिदेवको शव चिताबाट उठाएर अस्पताल लगियो
एउटा बर्गर लिन ४ किलोमिटर लामो लाइन, १४ घण्टा लामो प्रतिक्षा
१९ लाख डलरको परेवा
छोरी माग्न जाँदा २४ वर्षीया बाइडेनले भनेका थिए- एक दिन राष्ट्रपतिको चुनाव जित्नेछु
कर्णाली प्रदेश, देश, यस्तो पनि
भगवानले रक्सी रोकेपछि …
यस्तो पनि, राजनीति
चुनाव जितेको खबर सुन्न नपाई कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु
कोभिड–१९ नियन्त्रण नियम उल्लङ्घन गरेको आरोपमा नयाँ बेहुलीलाई १३ हजार डलर जरिवाना
नेदरल्याण्डमा गम्भीर बिरामी बच्चालाई मृत्यु दिन चिकित्सकले निर्णय गर्न सक्ने नयाँ कानून
यस्तो पनि, राजनीति, समाचार
१६ वर्षीया किशोरीले सम्हालिन फिनल्याण्डको प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी
काकाबाट बलात्कृत १४ वर्षीया बालिकाले बच्चा जन्माइन्
नेकपा विवादः ओलीको बोली कडा, व्यवहारमा अलमल
काठमाडौँ, २० मंसिर । सधैंझै सत्तारुढ नेकपाको बैठकमा शनिबार पनि नेकपा अध्यक्ष रन्किए । उनले कडा कडा कुरा गरे । झण्डै चार घण्टासम्म...
ओली कुशासनको धमिलो पानीमा माछा नमार्न राजावादीलाई डा. भट्टराईको चेतावनी
काठमाडौं, २० मंसिर । जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले राजावादीहरुलाई फोहोरको डुंगुरमा...
मिस नेपाल वर्ल्डको उपाधि नम्रता श्रेष्ठले जितिन्
काठमाडौं, २० मङ्सिर । मिस नेपाल वर्ल्ड-२०२० को उपाधि नम्रता श्रेष्ठले जितेकी छिन् । होटल पार्क भिलेजमा भएको मिस नेपालको ग्रान्ड...